रेडियो आफ्नो एफ.एम.ले मनायो तेस्रो वार्षिक उत्सव ः उत्सवमा फलफूल, सम्मान पत्र र रेडियो वितरण
२७ पुस, २०७५
रुकुम (पश्चिम) को चौरजहारीमा रहेको रेडियो आफ्नो एफ.एम. ९०.४ मेगाहर्जले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरुलाई फलफूल वितरण तथा मञ्चको कार्यव्रmममा आयोजना गरि आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाएको छ । दोस्रो वर्ष पूरा गरि तेस्रो वर्ष प्रवेशको अवसरमा रेडियोले चौरजहारी अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरुलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै फलफूल वितरण गरेको हो । चौरजहारी नगरपालिकाको सभाहलमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरि शुभकामना आदान प्रदान तथा रेडियोलाई सहयोग गर्ने सहयोगी दाताहरुलाई सम्मान पनि गरिएको छ ।
शैक्षिक सत्र २०७४ मा चौरजहारी नगरपालिका भित्रका कक्षा ८ मा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने चार जना विद्यार्थीलाई कापी,कमल, झोला लगायका सामग्री प्रदान गरेर सम्मान गरिएको छ । त्यसैगरि रेडियोलाई सबैभन्दा बढी विज्ञापन दिएर सहयोग गर्ने विज्ञापनदाता, सल्लाहकार, सहयोगी र रेडियोमा कार्यरत उत्कृष्ट कर्मचारी तथा पत्रकारहरुलाई पनि सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ । नियमित रेडियोमा फोन सम्पर्कमा आउने तथा रेडियो पारखी १६ जना श्रोताहरुलाई एक एक सेट रेडियो पनि प्रदान गरिएको छ । रेडियोलाई विशेष योगदान गर्ने व्यक्तित्वहरुलाई मायोको चिनो पनि प्रदान गरिएको छ ।
चौरजहारी नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित कार्यव्रmमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विशाल शर्माले रेडियोले जनतालाई सहज रुपमा जनचेतना र सुसूचित गराउने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो । विभिन्न समस्या र कठिनाइका बाबजुद रेडियो स्थापना र कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण निकै प्रशंसनीय छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञानविज्ञान र मनोरञ्जको असल सारथि बनिरहेको छ प्रमुख अतिथि शर्माले भन्नुभयो यो सानो बालक छ,यसलाई जवान बनाउन हामी सबैको सहकार्य जरुरी छ । सत्यतथ्य सूचनाको सच्चा पहरेदार बनाउन रेडियोको संवृद्धि र विकासलाई नगरपालिका कार्यले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यव्रmमका विशेष अतिथि मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा रेडियो विभागका संयोजक विजय मानन्धरले रेडियोले स्थापनाको छोटो समयमै धेरै श्रोताको मन जित्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । छोटो समयमा नै लोकप्रिय रेडियो स्टेशनका रुपमा विकसित भएको पाएँ उहाँले भन्नुभयो यसको सम्भावना र भविश्य् उज्वल रहेको छ । रेडियो पहुँच विस्तार तथा थप गुणस्तर सुधारका लागि आफ्नोतर्फबाट पनि सक्दो सहयोग हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
रेडियो सञ्चलक संस्था चौरजहारी सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल रेग्मीको अध्यक्षता रहेको कार्यव्रmममा चौरजहारी नगरपालिका प्रमुख विशाल शर्माको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एच.डी.सी.एस.) का रेडियो विभाग संयोजक विजय मानन्धरको विशेष आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि लगायतको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन शेरप्रसाद ढकालले सञ्चालन गर्नुभएको थियो । आफ्नो एफ.एम. आफ्नो आवाज भन्ने मुल नाराका साथ २०७३ पुस २७ गतेदेखि रेडियो आफ्नो एफ.एम. ९०.४ मेगाहर्ज सञ्चालनमा आएको छ ।
छैटौं नगर परिषद सम्पन्न २ वटा विधेयक पारित
वृहत चौरजहारी महोत्सवको तयारी तीव्र